The iPhone nanị wuru na-ụdaolu, ọtụtụ nke nwere obere uru ka ọrụ. Dabara nke ọma, e nwere ọtụtụ ụzọ ị na-eji na-free ụdaolu n'ihi na gị iPhone. Mbụ usoro bụ ibudata free ụdaolu n'ime kọmputa gị na mgbe nyefee ha gị iPhone. Nke abụọ usoro bụ iji a free ringtone ngwa maka download na internet. Nke atọ usoro bụ iji free ringtone onye ngwa mere maka iPhone ngwaọrụ. Ikpeazụ ma ọ bụghị ndepụta usoro bụ ime ka ụdaolu na iTunes na mgbe ahụ na-ebufe ha gị iPhone. Unu ga-esi mgbagwoju anya n'ebe a; Aga m kọwaa ndị a ụzọ na nkọwa.
Tupu na-n'ime achọ ndị kasị mma ringtone n'ihi na gị iPhone, mbụ ị ga-aghọta nkwado format faịlụ gị iPhone ụdaolu. The iPhone akwado naanị ndị ụdaolu na M4R faịlụ extensions. Ị ga-ahụ na ọtụtụ n'ime ụdaolu na ndị mmadụ download si internet nwere MP3 faịlụ extensions. Ya mere, ị ga-tọghata MP3 ringtone faịlụ ndọtị n'ime .m4r faịlụ ndọtị iji na-eji ha na gị iPhone.
Usoro 1: Download free ụdaolu na kọmputa na nyefee ka iPhone
Usoro 2: Free ringtone ngwa
Method 3: Free ringtone onye ngwa ọdịnala n'ihi iPhone
Method 4: Onye kere ụdaolu na itunes na nyefe iPhone
Nzọụkwụ 1: Gaa saịtị a na-agagharị site na edemede ịhọrọ kasị mma ringtone ibudata n'ihi na gị iPhone.
Nzọụkwụ 2: Ị ga-enweta ọtụtụ ringtone nhọrọ maka download, dị họrọ pịa otu onye n'ime ha na-amalite usoro nke download.
Nzọụkwụ 3: Mgbe ịpị on gị chọrọ ringtone, ị ga-eduzi na ọzọ nhọrọ na pịa 'Sinụ Ringtone' button.
Nzọụkwụ 4: Pịa na download bọtịnụ-amalite nbudata na
Nzọụkwụ 5: Mgbe ịpị download button, zedge ga-arịọ gị ịbanye gị na aha njirimara na paswọọdụ. Ọ bụghị registration ma na-etinye ihe ọ bụla na aha njirimara na paswọọdụ gị oke. Gị ringtone ga-amalite ibudata ozugbo mgbe abanye paswọọdụ gị. Zọpụta dechara faịlụ n'ime kọmputa gị.
Nzọụkwụ 6: The iPhone nkwado naanị ndị ụdaolu na M4R faịlụ extensions. Zedge nwere ụdaolu na MP3 faịlụ extensions. Ya mere, ị ga-tọghata MP3 ringtone faịlụ ndọtị n'ime .m4r faịlụ ndọtị iji na-eji ha na gị iPhone. Wondershare Video Converter Ultimate Na Zamzar nwere ike ịbụ oké enyemaka na nke a.
Ịnwere ike ịnyefe ebudatara ụdaolu na kọmputa gị ka gị na iPhone site n'iji iTunes ma ọ bụ na-enweghị ojiji nke iTunes.
Ị nwere ike nweta free ụdaolu maka iPhone site na iji free ngwa. Ndị a free ngwa ekwe ka ndị ọrụ ike iPhone ụdaolu si iTunes n'ọbá akwụkwọ. Nanị nsogbu ndị a free ngwa nwere bụ na ụfọdụ n'ime ha nwere ike iji rụọ ọrụ interfaces. I kwesịrị ịmata na ọ bụrụgodị na ndị a ngwa ọdịnala na-free iji, ọrụ ka mkpa iji ego iji budata ụdaolu si iTunes. Anyị n'ezie nwere ọtụtụ puku free ringtone ngwa ọdịnala dị na internet maka download. M na-aga depụta nanị n'elu atọ na-akọwa na gị otú ị ga-esi free ụdaolu mgbe eji ndị ngwa.
1. MYXER ụdaolu & RADIO
Nke a ngwa nwere wughachi ụdaolu na free redio ọrụ. Ọ na-enye ọrụ ohere hazie e iPhones na ibudatara na ahaziri ụdaolu. I nwekwara ike hazie gị redio mgbe eji nke a ngwa site n'ịhọrọ ọkacha mmasị gị songs ma ọ bụ na-ese. A na ngwa na-achọ iOS 6.0 ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Ọ bụ dakọtara na iPod aka na iPhone, iPad, ma kachasị maka iPhone 5.
ZEDGE Ringtones & na akwụkwọ ahụ aja
Na ZEDGE i nwere ike inwe na-akparaghị ókè ụdaolu n'ihi na gị iPhone. Ọ na-enye na-akparaghị ókè ụdaolu, ngosi ụda, ozi-aj u na mkpu ụda. A na ngwa bụ dakọtara na iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c na iOS 6 ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Ọ nwere ngwa ngwa iji nweta interface na a ndabere na dabara mkpọchi ihuenyo na n'ụlọ ihuenyo. Ndị ọzọ na-agụnye UI fixes, Crash na arụmọrụ fixes na iOS7 ịke keyboard.
Nke a bụ ngwa na-enye gị 1500 na-akparaghị ókè free ringtone n'ihi na gị iPhone. Ị nwere ike hazie gị iPhone ụdaolu, ozi ma ọ bụ mkpu na ọkacha mmasị gị ụda. Ọ nwere na-akparaghị ókè edemede na-agụnye izuike-aj u, na-akpa ọchị ụda, nsonaazụ ụda, mberede sirens, explosions, egwuregwu vidio, oké njọ-aj u na ọtụtụ ndị ọzọ. E wezụga nbudata ọkacha mmasị gị ụda, ọ na-enye gị ohere ịkọrọ ndị ụdaolu na ndị enyi gị na ezinụlọ.
Ndị a free ringtone onye ngwa ọdịnala na-enyere gị iji tọghata gị songs n'ime a 30 abụọ ụdaolu ma nyefee ha gị iPhone. Mbụ ị ga-hụ na ụdaolu na ị nyefee nwere .m4r ndọtị nke bụ a faịlụ ndọtị ghọtara site iPhones. E nwere ọtụtụ free ringtone onye ngwa ọdịnala na internet. Adị m nanị aga depụta ha atọ ma na-akọwara gị otú i nwere ike inwe free ụdaolu na ndị ngwa karị.
Ị pụrụ ime ka na-akparaghị ókè ụdaolu si gị iPhone n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ ndekọ ụda na-atọghata ha ka ha ụdaolu na iji inbuilt okwu. Na a na ngwa ị nwere ike ịmepụta ụdaolu nke ruo sekọnd 40 n'ogologo. Ọ nwere ichabo na a ichabo na ụda mmetụta. Ọ nwere ihe anya ini enye okụtde palette nke na-enye ọrụ magburu onwe onye ọrụ ahụmahụ.
Ringtone Onye kere
Na nke a ngwa, i nwere ike iji songs gị iPhone music n'ọbá akwụkwọ ike ụdaolu. Ọ pụrụ inyere gị hazie Tweet ụda, Text ụda, Alert ụda, Kalinda ụda, Mail ụda na Nchetara ụda. Key atụmatụ nke a na ngwa na-agụnye ichabo na na-agwụ ụda mmetụta, mfe akara mmalite oge, na quickness na ụda na ndekọ na ringtone edezi. Nke a ringtone Onye Okike na-achọ iPhone iOS 4 na 3GS ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
Na Mepụta Ringtones ringtone onye, ​​ị pụrụ ime-aj u nke omenala ụdaolu n'ime a nnọọ obere oge. Ị nwere ike iji gị iPhone music n'ọbá akwụkwọ songs ike ụdaolu. E mere ya na elu njikwa dị ka Adalata na na-agwụ ụda mmetụta, mara mma interfaces na irè mmalite oge njikwa.
Ị nwere ike mfe ime ka ụdaolu na iTunes ma nyefee ha gị iphone. Ka na-ekwu na ị nwere a song na kọmputa gị na ị chọrọ setịpụrụ dị ka a ringtone, SMS anya ma ọ bụ oti mkpu, ị nwere ike mfe tọghata a song on iTunes na nyefee ya gị iPhone dị ka a ringtone. Usoro a bụ nnọọ n'ụzọ kwụ ọtọ dị ka ị pụrụ ịghọta si guideline n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: My na-elekwasị anya ga-na otú e si eji a ngalaba nke a song echekwara na kọmputa gị na-eme ka a ringtone na-eji iTunes. Gaa gị na kọmputa na-ẹkedori gị iTunes ngwa. Họrọ song site na kọmputa gị na mbubata ya ka iTunes ngwa na ị meghere. I nwere ike ime nke a site na nri ịpị faịlụ na ị na-ahọrọ na-emeghe na iTunes.
Nzọụkwụ 2: Họrọ song na ị chọrọ iji dị ka ringtone
Nzọụkwụ 3: Right pịa na song na họrọ nhọrọ 'Sinụ Info'
Nzọụkwụ 4: Họrọ nhọrọ taabụ
Nzọụkwụ 5: Hazi nkwụsị oge na mmalite oge maka gị ringtone. Nke a ga-ekwe ka ị na-ahọrọ na ngalaba nke song na ị chọrọ tọghata n'ime a ringtone. ITunes ga na-ekwe ka ị họrọ ụdaolu na-sekọnd 30 ogologo ma ọ bụ na-erughị. Mgbe ahụ gaa nzọụkwụ ọzọ site na ịpị OK.
Nzọụkwụ 6: Ikewapụ akụkụ na ị họrọ si mbụ faịlụ. I nwere ike ime nke a site na nri ịpị faịlụ ọzọ na ị na-ahọrọ nhọrọ Mepụta ACC version. Nke a ga-atụgharị gị mbụ song abụọ mbipụta, a mkpumkpu na onye na-aba otu. The mkpumkpu oyiri bụ gị ringtone.
Nzọụkwụ 7: mgbe ahụ gaa na obere song na nri pịa ya. Ọ bụrụ na ị na-eji Mac, họrọ nhọrọ "Gosi na Finder." Ọ bụrụ na ị na-eji Windows, họrọ nhọrọ "Gosi na Windows Explorer." A ọhụrụ window nwere ma ndị mbụ song na converted ringtone ga-apụta.
Nzọụkwụ 8: Gbanwee faịlụ ndọtị gị ringtone si .m4a ka .m4r faịlụ. Ọ bụrụ na ị na-eji Windows nri pịa ringtone ma họrọ 'Kpọgharia aha.' Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, jide Mgbanwe button na pịa na song. Pịa ee nyegharịa faịlụ.
Nzọụkwụ 9: Hichapụ na ACC version na ị kere si iTunes. Ihichapụ mkpumkpu faịlụ nke song si iTunes.
Nzọụkwụ 10: Iji mbubata ringtone ka iTunes, abụọ-pịa na .m4r faịlụ na Finder window
Nzọụkwụ 11: Iji chọta ndị .m4r faịlụ, pịa-aj u na n'aka ekpe mmanya nke iTunes. Iji nyefee faịlụ n'ime gị iPhone, ịdọrọ ya n'ime gị họọrọ ekwentị nchekwa. Ọzọ nhọrọ nke na-ebufe a .m4r faịlụ bụ Email na faịlụ gị iPhone.
> Resource> iPhone> Esi Free Ringtones maka iPhone